Home Somali News Syria: ISIS oo qabsatay magaalada Taariikhiga ah ee Palmyra
Kooxda xagjirka ah ee ISIS ayaa la wareegtay gacan ku heynta magaalada Qadiimka ah ee Palmyra oo ku taal waqooyi bari dalka Siiriya.
Magaalada Palmyra oo 200km dhanka waqooyi bari uga beegan caasimada Dimishiq ayaa lagu tilmaamaa magaalooyinka ugu taariikhda dheer Bariga Dhexe waxaana ku yaal daaro qadiima ah iyo goobo badan oo taariikhi ah.
Xoogaga ISIS iyo ciidamada Dowlada Bashar Al Assad ayaa magaalada ku dagaalamayey tan iyo axadii lasoo dhaafay, waxaana la sheegay in kooxda ISIS ay Arbacadii shalay si dhameystiran ulla wareegtay gacan ku heynta magaaladaasi.
Qaramada Midoobay oo baaq kasoo saartay dagaalka Palmyra ayaa ka walaacsan in kooxda ISIS ay burburiso xarumaha taariikhiga ah ee ku yaal magaaladaasi, kooxdaasi oo horey usoo burburiyey magaalooyinkii taariikhiga ahaa ee ku yiilay dalka Ciraaq.
ISIS ayaa la sheegay inay ka ganacsato qalabka qadiimka ah ee yaala magaalooyinka madxafka laga dhigay oo ay horey ugu faani jireen dalalka taariikhda dheer ee Ciraaq iyo Siiriya.
Miciinka 1-aad Ee Somaliland Waa Ethiopia W/Q Mohammed Abdi Hassan Diridhaba